Raha nanitsy ny mekanika ny ekipa mpamonjy voina an-trano ary nahavita nanova ny tenany dia ny ekipa mpamonjy voina shinoa dia nankany ivelany ary nandray anjara tamin'ny famonjena ny sehatra iraisam-pirenena.
Tamin'ny Martsa 2019, firenena telo any atsimo atsinanan'i Afrika, mozambique, Zimbabwe ary Malawi, no tratran'ny rivodoza idai tropikaly. Ny tondra-drano be, ny tany nihotsaka ary ny ony nateraky ny tafio-drivotra sy ny orana mivatravatra no niteraka fahavoazana be sy fatiantoka fananana.
Raha nankatoaviny ny minisiteran'ny sampana vonjy maika, dia nandefa mpikambana 65 avy amin'ny ekipa mpamonjy voina sinoa tamin'ny faritra tra-doza nisy fitaovana famonjena sy kojakoja 20 taonina ho an'ny fikarohana sy famonjena, serasera ary fitsaboana ara-pitsaboana. ny faritry ny loza
Tamin'ny volana Oktobra tamin'ity taona ity, ny ekipa mpamonjy voina sy ny ekipa mpamonjy voina any Shina dia nandalo ny fanombanana sy ny fisintonana ny ekipa mpamonjy voina iraisam-pirenena momba ny Firenena Mikambana, nahatonga an'i Shina ho firenena voalohany any Azia ho ekipa mpamonjy aina iraisam-pirenena roa.
Ny ekipa mpamonjy voina iraisam-pirenena Shina, izay nandray anjara tamin'ny fanombanana niaraka tamin'ny ekipa mpamonjy voina Sinoa dia niorina tamin'ny 2001. Tamin'ny horohoron-tany tamin'ny taona Nepal, dia io no ekipa mpamonjy voina iraisam-pirenena tsy voamarina voalohany tonga tany amin'ny faritry ny loza tany Nepal, ary ny ekipa mpamonjy voina voalohany nanavotana ireo olona tafavoaka velona, ​​ary nahitana sisa velona 2 tafavoaka velona.
“Ny ekipa mpamonjy tena iraisam-pirenena Shina dia nandalo ilay fisintonana, ary ny ekipa mpamonjy voina Shinoa dia nandalo ny fitsapana voalohany. Izy ireo dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny rafitra famonjena famonjena iraisam-pirenena. “Ramesh rajashim khan, solontenan'ny biraon'ny Firenena Mikambana amin'ny fandrindrana ny raharaha maha-olona.
Ny hery mpamonjy voina ara-tsosialy ihany koa dia fitantanana miandalana, mitohy hatrany ny fahavitrihana handray anjara amin'ny fanavotana, indrindra amin'ny fanavotana ny loza voajanahary lehibe, hery ara-tsosialy marobe ary ekipa mpamonjy voina an'ny firenena ary ekipa mpamonjy voina hafa. mifameno.
Tamin'ny taona 2019, ny minisitry ny fitantanana vonjy maika no nanao fifaninanana fahaiza-manao voalohany an'ny firenena ho an'ny mpamonjy voina.Teams izay nahazo toerana telo voalohany ao amin'ny fifaninanam-pirenena dia afaka mandray anjara amin'ny asa famonjena vonjy maika amin'ny loza sy ny loza manerana ny firenena.